INokia Lumia 830: Uphengululo lweVidiyo kunye noHlahlelo | Iindaba zeGajethi
UPablo Ortega | | Iiselfowuni, Reviews, Umnxeba
INokia Lumia 830 yenye yeefowuni zamva nje ezivela kwaMicrosoft eziza kubonisa uphawu lwakwaNokia. Ukusukela ngoku ukuya phambili, ixesha elidlulileyo laseFinland liya kwaphulwa kwaye kuya kusetyenziswa kuphela utyikityo "Lumia". Sijongene nesiphelo esingaphoxeki. Yi phakathi kuluhlu olunentsebenzo ephezulu, Elungiselela abathengi abakhathalele imiba efana nobomi bebhetri kunye nomgangatho weefoto.
Ukongeza, iMicrosoft isimema ukuba sisebenzise eyethu Nokia Lumia 830 njengeqabane elifanelekileyo xa kusiziwa ekuzilolongeni. Isixhobo sidityaniswe ngokugqibeleleyo nesongo sokulinganisa UFitbit kunye nomncedisi welizwi uCortana, ezakusinceda kule mihla yethu. Sihlalutya i INokia Lumia 830.
3 Iinkcukacha zoBugcisa
5 Ifowuni yeWindows kunye neCortana
Le modeli ilandela isitayile kunye nokwenziwa kwezinye iifowuni Uluhlu oluphakathi lweNokia Lumia. Sifumana isixhobo soxande kunye nemiphetho erondo. Umva yiplastiki, kodwa ukugqitywa kwayo kuyimatte, ke ayizukubongwa ukuba yiplastiki elula. Oku kugqitywa kukwazi ukuhambisa imvakalelo yobuhle. Ukuqhubeka nokunceda ukwakha le mvakalelo, iNokia ibandakanye isinciphisi sesinyithi. Uyilo ngokwalo lushiya incasa elungileyo emlonyeni wakho, ngakumbi ukuba uyazi indlela yokudibanisa kakuhle.
Umva we INokia Lumia 830 iyatshintshana. Kwipakethi yethu, ifowuni yayiquka ibhokisi emnyama, enokuthi ithathelwe indawo zezinye izithunzi, ezifana nomhlophe kunye neorenji; kodwa umzimba omnyama ngoyena ulungele le Nokia Lumia.
Ifowuni inemilinganiselo ye-139,4 x 70,7 x 8,5 mm kunye nobunzima be-150 gram. Eli lisebe uMicrosoft angazange akhathalele ngalo: inkampani ikhetha ukwenza iifowuni ezinkulu, kodwa inikele nge ixesha eliphezulu lebhetri.
Njengoko besilindele, i INokia Lumia 830 ayisekho ngasemva kwiinkcukacha zobuchwephesha, nangona iyifowuni efikelelekayo ngokufanelekileyo kwiipokotho zethu.
Siqala ngokuthetha malunga nokungalunganga: isikrini, Ii-intshi ezintlanu, ayizukubonelela ngesisombululo esipheleleyo se-HD nge-5p: ihlala kwii-pixels ezingama-1080. Okuqinisekileyo koku kukuba ibhetri yethu iya kuhlala ixesha elide, ke ayizukuba yingxaki kwabanye. Elinye icala elisezantsi yile iprosesa, nge-Snapdragon 400 yomhla othile, kodwa ekusebenziseni kwethu ifowuni asikhange sibone iingxaki kumqhubekekisi. Ifowuni ixhobisa i-1GB yememori ye-RAM.
Amanqaku kulungile: i-2.200 mAh ibhetri, i-16GB yayo yokugcina kunye nomfundi wekhadi le-MicroSD ukuyandisa ukuya kwi-128GB kwaye, inokuba ngenye indlela, ikhamera yayo.
UMicrosoft akaze adanise kwisebe lekhamera. Esi sixhobo sikwazi ukuthatha iifoto zesisombululo esiphakamileyo, ngaphandle kokuba zikwindawo ephantsi yokukhanya, enkosi yayo Iilensi ezili-10 zeemegapixel kunye nokudityaniswa kwetekhnoloji yePureView. Kwi-interface yefowuni siya kufumana zonke izixhobo zeMicrosoft camera eziza kusinceda silawule neyona nkcukacha zincinci zeefoto. Le fowuni iyakwazi ukurekhoda ividiyo kumgangatho we-4K kwaye ibandakanya ukhetho olufana nesicelo seLumia Cinematograph.
Ikhamera engasemva idibanisa isimilo somfanekiso kunye Zeiss ngokukhanya, Into enqabileyo ukuyibona kwifowuni yeMicrosoft yoluhlu.
Ifowuni yeWindows kunye neCortana
INokia Lumia 830 idibanisa, ngokungagqibekanga, Windows Phone 8.1; inkqubo yendalo enomdla eyenza uninzi lwembono ngeethayile eziphilayo okanye usetyenziso oluneempawu zalo ezisivumela ukuba sazi izaziso kwangoko. Inkqubo yokusebenza abanye abayithandayo, kodwa abanye abayithandi ngenxa yokulula kwayo kumacandelo athile. Ukongeza, ivenkile yesicelo lweWindows ayinayo ikhathalogu ebanzi, kuba abaphuhlisi bakhetha ukukhetha amanye amaqonga amabini apho bavelisa khona ingeniso ethe kratya: i-Android kunye ne-iOS.
Kodwa elinye lawona macandelo anomtsalane kwi-Lumia ecosystem yile umncedisi ongumntu uCortana ngoku ihambelana ngokupheleleyo nesacholo seFitbit yesilinganiselo. Ngokuthetha, uCortana noFitbit bazokwazi ukuqokelela idatha malunga nento oyityileyo namhlanje, umzekelo, okanye umsebenzi owenzileyo owenzileyo.
El Nokia Lumia 830 Sele ikhona eSpain nge-419 euro. E-United States ungayithenga nge-AT & T nge $ 99,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » INokia Lumia 830: Uphengululo lweVidiyo kunye noHlahlelo
Ungayigcina njani iWindows xa ingazukuqala kwakhona